2021 နွေရာသီအင်စတီကျု - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
နေ့စွဲ: ဇွန်လ 14-18, 2021
ဒီနှစ် IWCA နွေရာသီဌာနကိုစကားလုံးလေးလုံးနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ virtual၊ global၊ ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၁၄ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိပထမဆုံးနွေရာသီနွေရာသီအင်စတီကျုးရှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ SI သည်အစဉ်အလာအရရှေးရှေးများသည်နေ့စဉ်နေ့မှထွက်ခွာ။ စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်စုရုံးရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင်တစ်နေ့မှတစ်ရက်ဝေးရာသို့သင်ထွက်ခွာနိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိသင့်အတွက်မူယခုနှစ်အလိုက်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစာရေးခြင်းဆိုင်ရာစင်တာပညာရှင်များနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအားလုံးကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်သောပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်ကျင်းပပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် SI ကိုလက်ခံရန်ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ခြင်းကြောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀၀ သာရှိသည် (ပုံမှန်အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၉၀၀) ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ် SI သည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သည်။ အတိတ်နှစ်များကဲ့သို့ပင်သင်တန်းသားများသည်များစွာသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ လွတ်လပ်သောစီမံကိန်းအချိန်၊ လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အုပ်စုငယ်လေးများလမ်းညွှန်ခြင်း၊ အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လာမည့်ဇယားအသေးစိတ်ကို။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနောက်ဆုံး: ပြီလ ၂၃ ရက် iwcamembers.org။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလျှောက်ထားသူပထမ ဦး ဆုံးအဖွဲ့ဝင် 40 ကန့်သတ်ထားသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းကြေး: $ 400 ။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဖြေ - Aprilပြီ ၂၃ ရက်လျှောက်ထားတဲ့အသင်းဝင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အကန့်အသတ်နဲ့သာရနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ မေးခွန်းများကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Kelsey Hixson-Bowles or ဂျိုးဇက် Cheatle.
Kelsey Hixson-Bowles (Utah Valley တက္ကသိုလ်) အရေးအသားစင်တာများတွင် ၁၁ နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးဘွဲ့ကြိုသက်တူရွယ်တူနည်းပြဆရာအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည်စာတတ်မြောက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုလက်ထောက်ပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Utah Valley University (UVU) Writing Center ၏ဌာနဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ Kelsey သည် RMWCA ဘုတ်အဖွဲ့တွင် Utah ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး၊ MAWCA ဘုတ်အဖွဲ့တွင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။ သူမ၏သုတေသနအကျိုးစီးပွားများမှာအရေးအသားစင်တာလေ့လာခြင်း၊ သင်ယူခြင်းပြောင်းခြင်း၊ စာအရေးအသားနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားနှင့်အရေးအသားစင်တာများနှင့်အရေးအသားစာသင်ခန်းများတွင်လူမှုရေးတရားမျှတမှု။ လတ်တလောထုတ်ဝေမှုများတွင်“ သင်ကြားပို့ချသူများ - မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုနှင့်ကျူရှင်နှင့်စာရေးခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှု” တို့ပါဝင်သည် (စာရေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းပြဆရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပုံ။ WLN ဒစ်ဂျစ်တယ် Edited စုဆောင်းမှု) နှင့် "လွန်းယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်အလုံအလောက်ယုံကြည်မှု? နည်းပြဆရာများ၏အရေးအသားနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်စွာသင်ကြားပို့ချမှု၏အရေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ” (Praxis: စာပေစင်တာဂျာနယ်) ။ ကယ်လီသည် Ph.D ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ Pennsylvania ပြည်နယ် Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ Kansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ MA နှင့် BA ဘွဲ့များရရှိခဲ့သည်။ Kelsey သည်သူမ၏ပညာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများအပြင်ပန်းချီပညာရပ်များကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်း၊ မဟာဗျူဟာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကစားခြင်းနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကလေးငယ်များနှင့်ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်း / နယ်စပ်ဒေသကော်လီများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်း၊
ဂျိုးဇက် Cheatle အိုင်အိုဝါရှိအိုင်အိုဝါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှစာရေးခြင်းနှင့်မီဒီယာဌာန၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူသည်ယခင်ကမီချီဂန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရှိစာအရေးအသားဌာန၏လက်ထောက်ဒါရိုက်တာဖြစ်ခဲ့ပြီး Case Western Reserve တက္ကသိုလ်တွင်အတိုင်ပင်ခံနှင့်မိုင်ယာမီတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏လက်ရှိသုတေသနစီမံကိန်းများသည်စာအရေးအသားစင်တာများတွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်; အထူးသဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုပိုမိုထိရောက်စွာပြောဆိုရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်များအားထိရောက်စေရန်အတွက်သူစိတ်ဝင်စားသည်။ သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်းမှထူးချွန်သောစာပေပြုစုရေးဌာန၏စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုလေ့လာသည့်သုတေသနအဖွဲ့တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်
Neisha-Anne S အစိမ်းရောင် (အမေရိကန်တက္ကသိုလ်) ၀ ါရှင်တန်ဒီစီရှိအမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှစာချွန်လွှာစင်တာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကျောင်းသားပံ့ပိုးမှု ၀ န်ဆောင်မှုဒါရိုက်တာ၊ သူသည်စာရေးဆရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်တွဲဖက်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံ ၂ အတန်းတွင်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်နှင့်ထူးခြားသည်။ ဤသင်ခန်းစာကို AU ဌာန၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသားများကမတူကွဲပြားမှုများ၊ အားလုံးပါ ၀ င်မှု၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုတို့သည်အဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ရန်ဖိတ်ခေါ်မှုအဖြစ် AU ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Barbados နှင့် Yonkers, NY ၌တည်၏။ သူမကအမြဲတမ်းသူမနှင့်အခြားသူများအတွက်ပြောဆိုရန်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်လူတိုင်း၏ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းနေသူဖြစ်သည်။ သူမသည်ထုတ်ဝေခဲ့သည် အလေ့အကျင့် နှင့် စာရေးခြင်းစင်တာဂျာနယ်; သူမအတွက်လာမည့်စာအုပ်အခန်းကြီးရှိပါတယ် အရေးအသားစင်တာလေ့လာခြင်း၏သီအိုရီများနှင့်နည်းလမ်းများ - လက်တွေ့လမ်းညွှန်, လမ်းဆုံအရေးအသားစင်တာ - တော်လှန်ရေးမှအသံ နှင့် သင်ကြားခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု - IWAC ၂၅ နှစ်။ သူမသည် IWCA၊ IWAC နှင့် Baltimore Writing Center Association တွင်သော့ချက်စာတမ်းများပေးခဲ့သည်။ Neisha-Anne သည်လည်းသူမ၏စာအုပ်မှ A Caged Bird တွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
အဲလစ်ဇဘက် Boquet (Fairfield တက္ကသိုလ်)သည်အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ဖဲရ်ဖီးလ်၊ ဖဲရ်ဖီးလ်ရှိ၊ ဖဲရ်ဖီးလ်တက္ကသိုလ်ရှိစာပေစင်တာဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူမသည်ရေးသားသူဖြစ်သည် လိုင်းအနီးဘယ်နေရာမှာလဲ နှင့် စာရေးခြင်းစင်တာမှဆူညံသံ နှင့်ပူးတွဲရေးသားသူ The Everyday Writing Centre - အလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းUtah State University Press မှထုတ်ဝေသည်။ သူသည်ပူးတွဲအယ်ဒီတာအဖြစ်အသုံးအနှုန်းနှစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည် စာရေးခြင်းစင်တာဂျာနယ်သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းဗဟိုအသင်း၏ထူးချွန်သောသုတေသနဆုကိုနှစ်ကြိမ်လက်ခံရရှိသူဖြစ်သည်။ သူမရဲ့ပညာသင်ဆုကိုဂျာနယ်များစွာနဲ့ edited collection များမှာတွေ့ရသည် ကောလိပ်အင်္ဂလိပ်, ကောလိပ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, စာရေးခြင်းစင်တာဂျာနယ်နှင့် WPA: ရေးသားခြင်းအစီအစဉ်အုပ်ချုပ်ရေး။ သူမရဲ့ဖန်တီးမှုအတတ်ပညာကိုထုတ်ဝေသည် 100 စကားလုံးပုံပြင်, အပြည့်အဝကြီးပြင်းပြည်သူ့, အဆိုပါခါးသော Southernerနှင့် သေလွန်သောသူတို့သည်နေရာထိုင်ခင်း.